फेरि चर्कि’यो नवराज विक र सुष्मा मल्ल को सच्चाई अदा’लतको गेटमा घम्सा*घ*म्सी? nabaraj bk susma malla | Public 24Khabar
Home News फेरि चर्कि’यो नवराज विक र सुष्मा मल्ल को सच्चाई अदा’लतको गेटमा घम्सा*घ*म्सी?...
फेरि चर्कि’यो नवराज विक र सुष्मा मल्ल को सच्चाई अदा’लतको गेटमा घम्सा*घ*म्सी? nabaraj bk susma malla
पछिल्लाे समय टिकटकलाइ विश्वकै चर्चित सामाजिक संजालकाे माध्यामका रुपमा लिने गरिएकाे छ । टिकटकमा निकै ठूलो जमात छ जो आफुलाई सबै माझ पुर्याउन तल्लिन छ । टिकटक रमाइलाेकाे लागि धेरैले प्रयाेग गर्ने एउटा एप्स हाे । आफुहरुसँग भएकाे नाच्न गाउन सक्ने प्रतिभालाइ टिकटकमा राख्न र अरुकाे प्रतिभालाइ हेर्नकाे लागि प्रायले टिकटक चलाउने गर्दछन् ।
टिकटकले डाटा कटाैंती गरेकाे, धेरैकाे समय बर्वाद गरेकाे र सुरक्षाकाे लागि खतरा भएकाे भन्दै केहि देशहरुले याे एप्स बन्द समेत गरेका छन् । तर नेपालमा यसकाे प्रयाेग भने व्याप्त छ ।
अहिले नेपालीहरुमा सामाजिक संजालकर्ताहरुकाे धेरै जसाे समय टिकटकमा पनि खर्च हुने गरेकाे छ । केही आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर सबै माझ चिनिएका छन त केही उछृङ्खलता प्रस्तुत गरेर पनि भाइरल भैरहेका हुन्छन । टिकटकमा सर्वाधिक रुचाइएर स्टार बन्ने दौडमा रहेका कत्ती टिकटक कलाकारहरु पनि अहिले कलाक्षेत्रमा प्रसस्तै देख्न सकिन्छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यसैक्रममा अहिले टिकटकमा एउटा भाइरल जाेडी छ झलनाथ खत्री र विपना केसीकाे ! यी दुइ जाेडीका अर्गानीक भिडियाे अहिले भाइरल हुन पुगेका छन् । यो जोडीले हेर्दा सामान्य विषयबस्तुलाई टिपेर उत्कृष्ट र मौलिक ढंगले टिकटक भिडियोहरु निर्माण गर्दै आएका छन् ।
उनका साना साना भिडियो क्लिपहरुमा यथार्थता लुकेको हुन्छ । दुइ प्रेम जोडीहरुको माया प्रेमलाई यथार्थपरक र पुरानो शैलीमा प्रस्तुत गरिएका उनका भिडियोहरु अहिले निकै चर्चामा छन।
पछिल्लो समय उनिहरुले सारंगी दाइ, घाेडामा चामल बेच्दै गरेकाे, गाडीमा यात्रा गरेकाे, पानीपुरी बेचेकाे, घर बनाउनलाइ माटाे निकाल्दै गरेकाे अवस्थाकाे मायाप्रेम समेटेर बनाएकाे भिडियाे अहिले टिकटकमा भाइरल छन् ।
उनिहरुका यी एउटै भिडियाे टिकटकमा दशाैं लाखकाे भ्युज छ भने लाखाैंले लाइक गरेकाे देखिन्छ । पछिल्लो समय उनिहरुका भिडियोहरुलाई सबैले मन पराएर फेसबूकमा पनि सेयर गर्ने गरेका छन्।
यीनका यी भिडियाेलाइ नेपालका चर्चित गायक नारायण रायमाझी, पत्रकार दिल निशानी मगर, शिशिर भण्डारी लगायतले राम्राे भएकाे भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले विभिन्न सामाजिक संजालमा उनिहरुका भिडियो हेर्नेहरुबाट सकारात्मक टिप्पणी र हौसाला प्रदान भैरहेका छन् ।
काे हुन त झलनाथ र विपना
झलनाथकाे घर दाङकाे बबइ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ रातामाटा हाे भने विपनाकाे घर सल्यान जिल्लाकाे छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ लेखपाेखरा हाे । यी दुवै अहिले दाङकाे तुलसीपुरमा बस्ने गरेका छन् ।
यीनीहरु टिकटकका लागि मात्रै प्रेम जाेडी बनेपनि सामाजिक जिवनमा दाइ बहिनीकाे सम्बन्धमा छन् । उमेरले झलनाथ १९ वर्षका भए भने विपना १८ वर्षकी भइन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
झलनाथ आर्थिक हिसावमा कमजाेर भएपछि पढाइ छाेडेर केहि समय पहिले धन कमाउन भारत गएका थिए । लकडाउन भएपछि मात्रै उनि भारतबाट नेपाल फर्किएका हुन् । भारतमा हुँदा उनले मजदुरी काम गर्थे । पछि विस्तारै उनकाे प्रतिभा देखेर भारतका केहि संस्थाहरुले उनलाइ जनचेतना मुलक सडक नाटक खाेल्ने अवसर पनि दिएका थिए ।
लेकाली अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनि भन्छन्, ‘मैले भारतमा धेरै दुख गरे, घरमा रिन पनि थियाे, पैसा कमाउनु मेरा लागि चुनाैती थियाे । भारतमा मजदुरी काम सँगै सडकका गल्ली गल्लीमा गएर सडक नाटक देखाउने अवसर पाएपछि मैले केहि अभिनय सिक्ने माैका पाएकाे हुँ ।’
झलनाथकाे घरमा आमाबुबा, हजुरआमा, दाइ र एउटा भाइ छन् । दाइ एक वर्ष अगाडी रिन कर्जा गरेर जापान गएपछि अहिले आर्थिक स्थिती माथी उठ्दै गरेकाे उनले बताए ।
त्यस्तै विपना पनि ८ कक्षामा पढ्दादेखि सल्यानबाट दाङ झरेकी हुन् । उनि अहिले कक्षा ११ मा पढ्छिन् । विपनाका आमाबुबा बिदेशमा छन् भने भाइ उनि सँगै तुलसीपुरमा आफन्तकाे घरमा बस्दै आएका छन् । लकडाउन भएपछि उनले अहिले गुडिया बनाउने तालिम सिक्दैछिन् ।
कसरी भयाे झलनाथ र विपनाकाे भेट
लकडाउन भएपछि घर आएका झलनाथले परिवारसँगै तुलसीपुरकाे बेलुवामा घर बनाउने तयारी गर्दै थिए ।
उनि भन्छन्, ‘एकदिन घर बनाउनकाे लागि हामीले घरकाे जग खनेर माटाे निकाल्दै थियाैं । काम गर्ने दाइहरुसँग मैले जिस्किदै टिकटक बनाउनुपर्छ भनेकाे थिए । त्यतिकैमा विपना साथीहरुसँग घुम्दै हामी भएकाे ठाउँकाे बाटाेबाट आइन् । मैले उनलाइ हेर्दा टिकटक बनाउछिन हाेला जस्ताे लाग्याे र टिकटक बनाम भनेर आग्रह गरे ।’
पहिलाेपटक झलनाथ र विपनाकाे भेट घरकाे जगमा माेटाे निकाल्ने क्रममा भएकाे थियाे । त्यसपछि उनिहरुले टिकटक बनाए । टिकटकमा उनिहरुकाे मायाप्रेमकाे भाव थियाे । झलनाथले काम गर्दै गरेकाे र विपनाले घरकाे झ्यालबाट मायालु भावमा हेर्दै गरेकाे भिडियाेमा कथावस्तु समेटिएकाे थियाे ।
अहिले उक्त भिडियाे १५ लाख बढीले हेरेका छन् भने १ लाख ५१ हजारले लाइक गरेका छन् । उनिहरुकाे प्रेम जाेडीकाे भावना समेटिएकाे भिडियाे त्यसपछिबाट आउन थालेका हुन् ।
कसरी बनाउँछन् भिडियाे
उनिहरुले सुरुमा साच्चिकै काम गर्दाखेरीकाे अवस्थामा भिडियाे बनाएका थिए । उक्त भिडियाे भाइरल भएपछि उनिहरुलाइ अरु भिडियाे बनाउनु पर्छ भन्ने साेच भयाे र धेरैबाट बनाउनुपर्ने सल्लाहा पाएपछि उनले विभिन्न कथा बुनेर अरु भिडियाे बनाउन थाले ।
झलनाथ भन्छन्, ‘म सँग एउटा माेबाइल छ । कहिल्यै मेराे भाइले खिचिदिन्छ नत्र जाे भेटियाे उसैलाइ खिच्न लगाएर भिडियाे बनाउछाैं ।’ उनका भिडियाे टिकटकमा अरुले बनाएजस्ता हुँदैन् । फरकफरक लिप्सिङ खिचेर उनले इडिट गरेर भिडियाे बनाउछन् । जुन सबै काम माेबाइलबाटै बनाउछन् । उनि भन्छन्, ‘एउटा भिडियाे खिच्न आधा घण्टा सम्म लाग्छ । हामीलाइ धेरै टेक लिनु पर्दैन् तर कथा बस्तुले गर्दा आधा घण्टा सम्म लाग्ने गर्दछ ।’
भिडियाे बनाउँदा राम्राे र नराम्राे कुरा
घाेडामा चामल बेच्दै गरेकाे भिडियाे बनाउँदाकाे अनुभव रमाइलाे भएकाे झलनाथ सम्झन्छन् । लेकाली अनलाइनसँग अनुभव सुनाउँदै उनि भन्छन्, ‘एकदिन म घरमा बसेकाे थिए । नजिकैकाे एकजना दिदिले घाेडा आयाे बाबू टिकटक बनाउँनु भन्नुभयाे । त्यसपछि मैले विपनालाइ बाेलाए । घाेडावाला दाइलाइ दुइसय रुपैयाँ दिए । उहाँलाइ घरमा खाना दियाैं । उहाँ खाना खाँदै गर्नुभयाे । हामी भिडियाे बनाइम ।’
त्यस्तै चट्पटेवाला भिडियाे बनाउन उनिहरु बसपार्क पुगेर बनाएकाे बताए । ‘हामीले चट्पटे दाइसँग कुरा गरेर भिडियाेकाे लिप्सिङ लिदै थियाैं, वरिपरि हेर्नुहरु सबै हाँसेर हामीलाइ लजाउन गर्थे तर हामी लाज नमानेरै भिडियाे बनाइम’ ,उनले भने । गाडीमा भिडियाे बनाउँदा यात्रुहरु सबैले जिस्काएर हैरानै बनाएकाे उनि उनले अनुभव सुनाए ।
उनि भन्छ्न्, ‘कथा वस्तु अनुसारका भिडियाे बनाउदा खेरी देख्ने अरु मान्छे हाँस्ने गर्दछन् । तर हामी अभिनय गर्नेहरुले केहि लाज नमानेर गरेपछि उनिहरु पनि चुप लाग्छ्न् ।’
फिल्मी क्षेत्रमा जाने चाहाना छ
झलनाथ र विपनाले पहिलेदेखि नै फिलिम खेल्ने चाहाना भएकाे बताउछन् । आर्थिक अवस्था कम भएकाे कारण याे क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसकेकाे उनिहरुकाे दुखेसाे छ । अभिनय क्षेत्रमा घर परिवारदेखि राम्राे सपाेर्ट भएकाे कारणले पनि समस्या नहुँने उनिहरु बताउछन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous articleयी हुन् तस्करी रोक्ने प्रह*रीको ह*त्यामा संलग्न ७ अभि*युक्त
Next articleदाङ्ग घट*नाको कारण सुन्दा सबै छ*क्क ! एउटा कुखुराको भालेका लागि साथिले यस्तो पनि गरे